Tenisy ambony latabatra – «Open de Tana» : handray anjara i Anja, mpilalaon’ny Lyon | NewsMada
Tenisy ambony latabatra – «Open de Tana» : handray anjara i Anja, mpilalaon’ny Lyon
Hanamarika ity faran’ny herinandro ity, ny “Open de Tana”, taranja tenisy ambony latabatra, karakarain’ny seksiona Antananarivo Renivohitra. Hisy mpilalao mpila ravinahitra, handray anjara amin’izany.
Hotanterahina, etsy amin’ny efitranon’ny ANS Ampefiloha, ny 28 – 30 desambra ho avy izao, ny andiany fahatelo, amin’ny “Open de Tana”, taranja tenisy ambony latabatra.
Hiavaka ity farany ity, satria handray anjara, i Anja mpilalaon’ny Tennis de Table G Lyon 7, Frantsa. Ankoatra izay, hamaritra ireo ankizy mianadahy U16, hahazo ilay fiofanana, any amin’ny Club Sportif Municipal Puteaux Frantsa. Hatreto aloha, mitarika eo amin’ny lehilahy i Angelo avy amin’ny Aro CFTT sy i Luciano avy any Alaotra Mangoro. I Ny Antsa sy i Mendrika kosa izay samy avy amin’ny Aro CFTT ny eo amin’ny vehivavy. Hanatrika ity “Open de Tana” ity ny solontenan’ny Cap Madagascar France, mpanohana ny seksiona Antananarivo Renivohitra, hanolotra ireo tapakila roa ho an’izay mendrika. Hanokatra ny fihaonana ny 28 desambra ho avy izao, ny fiadiana ny ho tompondaka eo amin’ny olon-tokana (1 ère, 2ème, 3 ème série) lehilahy, izay tokony novitaina ny volana jolay lasa teo, saingy tsy vita noho ny tsy fahazoana efitrano filalaovana.
Ny 29 desambra vao hanomboka ny “Open” ka fifanintsanana mivantana ka mivoaka ho mpandresy, izay mahazo seta 4 voalohany. Marihina fa hifampitana amin’izany ny sokajy “toute catégorie” lahy sy vavy ary ny 2 ème sy 3ème série lehilahy ary ny “Non licenciés” lahy sy vavy miampy ny an’ny U16.
Ankoatra ny amboara sy ny medaly, hahazo lelavola 280.000 Ar ny ho mpandresy, raha 60.000 Ar ny an’ny resy. Homena fanomezana manokana ny klioba mahavita vokatra tsara indrindra. Ankoatra an’Analamanga, handray anjara koa Alaotra Mangoro sy Matsiatra Ambony ary Atsinanana. Ity fifaninanana ity koa no manakatona ny taom-pilalaovana ho an’ny seksiona Antananarivo Renivohitra.